के हो सफलता ? जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने ? - kageshworikhabar.com
“जीवनमा अप्ठयारा परिस्थििति आउनु जरुरी छ । तिनै अप्ठयारा परिस्थितिले नै मानिसलाई सफलतामा रमाउन सिकाउँछन् ।”
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि मानिस आफ्नो निश्चित उदेश्य र लक्ष्यमा पुगी सफलता हाँसिल गरेकोलाई मानिन्छ । जसमा सन्तुष्टि मिल्छ । सबै व्यक्तिहरुले आफूले तोकेको उदेश्य पूरा गर्न सकेको अवस्थालाई सफलता प्राप्त गरेको भनेर बुझिन्छ । हरेक व्यक्तिहरु आफ्नो सफलतामा पुग्न खोज्छन । तर सबै सफलतामा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
मानिसहरुको फरक–फरक उदेश्य, इच्छा र रोजाइहरु हुन्छन । त्यसमा पनि कसरी सफलतासम्म पुग्ने भन्ने कुरामा चाँही सबैको फरक फरक धारणहरु छन् । सफलता पाउन जीवनमा धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । जब मानिसहरु एक चोटी असफल हुन्छ ,त्यही असफलको डरले सफलतासम्म पु¥याउने मद्दत मिल्छ । जीवनमा असफल हुनु नै सफलताको प्रतिक हो ।
मानिसहरु हरेक काममा सफलता हाँसिल गर्न चाहान्छन् । अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय पनि हो । सफलता पाउँनको लागि पनि मानिसहरु प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । निरन्तर रुपमा गुणात्मक परिणाम दिने क्षमता राख्यो भने मात्र सफलताको दिशामा जान सकिन्छ । जीवनमा सफलता पाउँन गाह्रो हुन्छ । जबसम्म त्यो व्यक्तिमा कुनै पनि किसिमको लक्ष्य, सपना, उदेश्य आदी कुराहरु हुँदैन।
सफलता पाउनमा मिहेनतको खाँचो पर्दछ । हामीले सफलतासम्म पुग्न भित्रि मनदेखि नै सकारात्मक कुराहरुलाई लिएर मनमा शान्त र सन्तुष्टी मिल्न पर्छ । कतिपय मान्छेहरु हामीले देख्छौं, सफलतामा पुगेर पनि मन खुसी भएको देखिदैनन् तर वास्तवमा भन्रु पर्दा सबै भन्दा पहिला मान्छेले आफ्नो भित्रि मनलाई पनि सफलता पर्नपर्छ ।
मानिसले सफलता पाउन र सफलता कायम गर्न धेरै फरक हुन्छ । जब त्यो पाएको सफलता कायम गर्नै सकेन भने उसमा हरेक किसिमका समस्याहरु आउन थाल्छ ।
सफता पाउँन के गर्नु हुन्छ ? यदि तपाईं जीवनमा सफलता पाउँन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु हुन्छ ?
जाीवनमा सफलता पाउँनको लागि सफलता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुको बारेमा जान्रे प्रयास गर्नुुस् । जसमा सफल पाएको व्यक्तिको परिश्रम र कठिन संघर्षको पाठबाट तपाईं हामीले केही नयाँ ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ ।
सफलता र असफलताको पछाडि तपाईंको इच्छा शक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ । आफ्नो इच्छा, चाहनाले मात्र सफल हुन सकिदैन त्यसको लागि मिहेनत र संघर्षको पनि जरुरी छ । सफता पाउनको लागि आफैंमा आत्मा निर्भर भई अगाडी बढ्नु पर्छ ।
वास्तवमा भन्नु पर्दा सफलता हाँसिल गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन तर सजिलो पनि छैन् । यदि तपाईं जीवनमा सफल नै चाहानुहुन्छ भने जीवनमा असल काम गदै जानुुस् । आफूमा एउटा आत्मशक्तिको बलका साथै बिस्वास र धैर्यता कायम राख्नुस् ।
यदि तपाईंले परिश्रम गर्दा पनि जीवनमा असफल भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस् । किनकि त्यही असफलताले तपाईंलाई सफलता प्राप्त गर्न सिकाउँछ । तर सफलताको लागि तपाईंमा कुनै पनि प्रयास छैन् भने अन्त्यमा तपाईं असफल नै हुनुहुनेछ ।
जीवनमा सधै सकारात्मक सोच राख्नुहोस् । साथै आफ्नो जीवनको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । जसले तपाईंको हरेक गतिविधि र सारा प्रयासहरुबाट असफल हुनु हुँदैन।
Previous articleभारतमा २४ घण्टामा थप ५६ हजार २११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleशिक्षकले सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार कहिले गर्ने ?